Zvirongwa neSevhisi - BullyingCanada
/ Zvirongwa & Masevhisi
Hupenyu: National Support Network
BullyingCanada yakagadzira 365-day-a-gore, 24 maawa-a-zuva, 7 mazuva-pa-vhiki rutsigiro network inopa rubatsiro rwekuchinja hupenyu hwevechidiki kuburikidza nerunhare, online chat, email, uye mameseji.
Iri sevhisi yerutsigiro haienzaniswi muCanada - ichienda kure kupfuura iyo yakajairwa kusazivikanwa kuraira kunopihwa nemamwe masangano anobatsira.
Nechikwata chinoumbwa nemazana evazvipiri vanobva mhiri kweCanada vachishanda vasinganeti kubva kudzimba dzavo, BullyingCanada inopa rubatsiro uye kupindira kudzivirira nekumisa kudheerera. Vazvipiri vedu vakadzidziswa kupa mazano, kudzivirira kuzviuraya, kuyananisira uye kugadzirisa matambudziko. Magamba aya kuziva matambudziko uye vagadzirise-kumisa kudheerera uye kudzivirira kuti zviitike zvakare.
Vanoita izvi nokuita kurukurirano dzakadzama, dzomunhu oga nepwere dzinodheererwa nemhuri dzavo; vanodheerera nevabereki vavo; vadzidzisi, vanachipangamazano, vakuru vezvikoro, uye vashandi vebhodhi rechikoro; mabasa munharaunda; uye, kana zvakakodzera, mapurisa emunharaunda. Chinangwa chedu ndechekugumisa kushungurudzika kwakasangana nevana, uye kuwana rubatsiro runodiwa rwekutevera runodiwa kuporesa.
Kazhinji, BullyingCanada proactively inoramba ichibatanidzwa kwemavhiki maviri kusvika matatu, asi mamwe mamiriro akaomarara anoda rutsigiro kwemwedzi kana gore kana kupfuura kugadzirisa. Hatikandi mapfumo pasi kusvikira vana vanodheererwa vakachengeteka uye vakwanisa kutungamirira kune ramangwana rakajeka.
Kugadzira Pfungwa Dzakasununguka uye Kudzivirira Vana
Pamusoro pekupa zvikoro uye sangano renharaunda nemaposta anopesana nekudheerera, mabhurocha, uye zvimwe zvinhu zvekudzidzisa, BullyingCanada, pasi pekutungamirirwa naRob Benn-Frenette, ONB, inopawo misangano yemapoka emhando dzose.
Mawekishopu aya anopa simba vechidiki nevatungamiriri venharaunda kuti vakwanise kurwisa kudheerera uye kuvapa nzira itsva dzekuti vagadzirise nyaya dzavanosangana nadzo muhupenyu hwavo hwese.
National Scholarship Chirongwa
Kusimbisa Vatungamiri Vechidiki
Chirongwa cheNational Scholarship Program chakatangwa muna 2013 kudzorera kune vechidiki, nevanogona kugamuchira vanosarudzwa nevashandi vechikoro. BullyingCanada inoziva kukosha kwekukudziridza vatungamiriri venharaunda vane shungu, uye yakagadzira chirongwa chenyika chekufunda chekupa mari yedzidzo yepashure-secondary.
Aya mabhezari anosimbisa vechidiki vanova vatungamiriri venharaunda vachigadzirisa kudheerera muzvikoro.
Hakuna Mwana Akasiiwa
Kubva 2006, BullyingCanada rave rerudzi Enda ku sangano kana zvasvika pakuedza kurwisa kudheerera. Chokwadi, isu tinoramba tiri isu chete sangano renyika rinopa rubatsiro rinoshanda nevechidiki vekuCanada, mhuri dzavo, uye nharaunda dzavanogara, vachipa rutsigiro rwenguva refu, zviwanikwa, uye ruzivo rwakakosha kudzivirira mhirizhonga yekudheerera uye kuchengetedza vana vedu.
Tinodada nekupa rubatsiro rwavanoda kuvana vanoshungurudzwa, kuwedzera zvirongwa zvedu kudzivirira mhirizhonga uye kuona kuti vana vedu vakachengeteka.
BullyingCanada inoshanda nesimba kutsigira vakamiririra vechidiki vanoshungurudzwa munyika yose—kuvaka ramangwana rakajeka uye rakanaka revechidiki vanodheererwa nenharaunda dzavanogara.
Vana vakawanda vane pfungwa yakanaka yokuti kudheerera chii nokuti vanozviona zuva nezuva! Kudheerera kunoitika kana mumwe munhu akuvadza kana kutyisidzira mumwe munhu nemaune uye munhu ari kudheererwa ane nguva yakaoma yekuzvidzivirira. Saka, munhu wese anofanira kubatanidzwa kuti abatsire kuimisa.
Kudheerera hakuna kunaka! Maitiro anoita kuti munhu ari kushungurudzwa anzwe kutya kana kusagadzikana. Kune nzira dzakawanda idzo pwere dzinodheererana nayo, kunyange kana ivo vasingazvizivi panguva iyoyo.
Mamwe acho anosanganisira:
Kurova zvibhakera, kusaidzira nezvimwe zvinhu zvinokuvadza vanhu panyama
Kuparadzira makuhwa akaipa pamusoro pavanhu
Kuchengeta vamwe vanhu kubva muboka
Kutsvinyira vanhu nenzira yakaipa
Kuita kuti vamwe vanhu "vaite gang" pane vamwe
Ndeapi marudzi anowanzo kudheerera?
Kudheerera nemashoko – kunyomba, kunyomba, kunyomba, kuparadzira makuhwa, kutyisidzira, kutaura zvakaipa nezvetsika nemagariro, dzinza, rudzi, chitendero, murume kana mukadzi kana hunhu hwepabonde, mashoko asingadiwi ezvepabonde.
Kudheerera Munzanga - kukorokotedza, kuzvidza, kusasanganisa vamwe kubva muboka, kunyadzisa vamwe nemaitiro eruzhinji kana kunyora mifananidzo nechinangwa chekuisa vamwe pasi.
Kudheerera Pamuviri - kurova, kutsonya, kudzvanya, kudzingirirana, kusaidzira, kumanikidza, kuparadza kana kuba zvinhu, kubata pabonde kusingadiwe.
Cyber ​​Bullying - kushandisa internet kana kutumira mameseji kutyisidzira, kuisa pasi, kuparadzira makuhwa kana kuseka mumwe munhu.
Ndezvipi zvimwe zvinokonzerwa nekudheerera?
Kushungurudzwa kunokanganisa vanhu. Inogona kuita kuti vana vanzwe kusurukirwa, kusafara uye kutya. Zvinogona kuita kuti vanzwe vasina kuchengetedzwa uye kufunga kuti panofanira kunge paine chakakanganisika pavari. Vana vanogona kurasikirwa nechivimbo uye vangasada kuenda kuchikoro zvakare. Zvingatoita kuti varware.
Vamwe vanhu vanofunga kuti kudheerera kunongova chikamu chekukura uye nzira yekuti vechidiki vadzidze kuzvimiririra. Asi kudheerera kunogona kuva nemigumisiro yenguva refu yemuviri uye yepfungwa. Zvimwe zvacho zvinosanganisira:
Kusiya mabasa emhuri uye echikoro, uchida kusara uri woga.
Kana kudheerera kukasamiswa, kunokuvadzawo vanenge varipo, pamwe chete nomunhu anodheerera vamwe. Vatariri vanotya kuti vanogona kunge vari ivo vanotevera. Kunyange kana vakanzwa zvakashata nokuda kwomunhu ari kudheererwa, vanodzivisa kubatanidzwa kuti vazvidzivirire vamene kana kuti nemhaka yokuti havana chokwadi chokuita.
Vana vanodzidza kuti vanogona kunzvenga chisimba uye chisimba vanoramba vachidaro pavanenge vakura. Vane mukana wepamusoro wekupinda mukufambidzana nehasha, kushungurudzwa pabonde, uye maitiro ehutsotsi gare gare muhupenyu.
Kudheerera kunogona kuva nemigumisiro pakudzidza
Kushungurudzika uye kuzvidya mwoyo kunokonzerwa nekudheerera uye kushungurudzwa kunogona kuita kuti zvive zvakaoma kuti vana vadzidze. Zvinogona kukonzera kuoma kwekuisa pfungwa pachinhu chimwe uye kuderedza kugona kwavo kuisa pfungwa, izvo zvinokanganisa kugona kwavo kurangarira zvinhu zvavakadzidza.
Kudheerera kunogona kutungamirira kune zvinetso zvakakomba
Kudheerera kunorwadza uye kunonyadzisa, uye vana vanodheererwa vanonzwa kunyara, kurohwa uye kunyara. Kana marwadzo akasapera, kudheerera kunogona kutotungamirira kukufunga kuzviuraya kana kuita zvechisimba.
Kudheerera kwakawanda sei?
MuCanada, mudzidzi mumwe chete pavatatu vari kuyaruka akataura kuti anodheererwa. Inenge hafu yevabereki vokuCanada vakashuma kuti vane mwana anodheererwa. Zvidzidzo zvakawana kudheerera kunoitika kamwe pamaminetsi manomwe ega ega panzvimbo yekutamba uye kamwe chete maminetsi makumi maviri nemashanu mukirasi.
Muzviitiko zvizhinji, kudheerera kunopera mukati memasekondi gumi apo vezera vanopindira, kana kuti vasingatsigiri maitiro ekudheerera.
Chii chandingaite izvozvi pamusoro pekudheerera munharaunda yangu?
Kutanga, rangarira kuti tauya kwauri 24/7/365. Taura nesu live, titumire an e, kana kutipa mhete pa1-877-352-4497.
Izvo zvakati, heano mashoma mashoma zviito zvaunogona kutora:
Udza mumwe munhu waunovimba naye – mudzidzisi, murairidzi, chipangamazano, mubereki
Taura chimwe chinhu chinofadza kune anodheerera kuti umuvhiringidze
Garai mumapoka kuti murege kunetsana
Shandisa zvinosetsa kukanda nhanho kana kubatana neanokudheerera
Ita sekuti munhu anodheerera wacho haasi kukukanganisa
Ramba uchizviyeuchidza kuti uri munhu akanaka uye akakodzera kuremekedzwa
Panzvimbo pokufuratira chiitiko chokudheerera, edza:
Udza mudzidzisi, murairidzi kana chipangamazano
Enda pedyo kana pedyo newakabatwa
Shandisa izwi rako - taura "mira"
Shamwaridzana nemunhu akabatwa
Tungamidza munhu akabatwa kure nemamiriro ezvinhu
Taura nemudzidzisi kana chipangamazano
Funga kuti unganzwa sei kana mumwe munhu akakudheerera
Funga nezvemanzwiro emunhu wako - funga usati waita
Ndeapi mamwe manhamba akakosha kuziva nezvekudheerera?
Canada ine nhamba yechipfumbamwe yepamusoro-soro yekudheerera muchikamu chevane makore gumi nematatu pachiyero chenyika makumi matatu neshanu. 
Anenge mudzidzi mumwe chete pavatatu vari kuyaruka muCanada akataura kuti ari kudheererwa munguva pfupi yapfuura. 
Pakati pevakuru vekuCanada, 38% yevarume uye 30% yevakadzi vakashuma kuti vakamboshungurudzwa apo neapo kana kuti kazhinji mukati memakore avo echikoro. 
47% yevabereki vekuCanada vanotaura kuti vane mwana akashungurudzwa. 
Chero kutora chikamu mukudheerera kunowedzera njodzi yepfungwa dzekuzviuraya muhuduku. 
Mwero werusarura unowanikwa pakati pevadzidzi vanozviti Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-identified, Two-Spirited, Queer or Questioning (LGBTQ) yakakwirira zvakapetwa katatu pane pwere dzine bonde. 
Vasikana ndivo vanowanzoshungurudzwa paInternet kupfuura vakomana. 
7% yevakuru vanoshandisa Internet muCanada, vane makore 18 zvichikwira, vakazvitaura kuti vakamboshungurudzwa necyber pane imwe nguva muhupenyu hwavo. 
Nzira yakajairika yekudheerera padandemutande yaisanganisira kugamuchira mae-mail ekutyisidzira kana hasha kana mameseji ekukurumidza, akashumwa ne73% yevakabatwa. 
40% yevashandi vekuCanada vanoshungurudzwa pasvondo rega rega. 
Canadian Council paKudzidza - Kudheerera muCanada: Kutyisidzira kunokanganisa sei kudzidza
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., uye HBSC Bullying Writing Group. Muchinjikwa-nyika nguva maitiro mukudheerera maitiro 1994-2006: zvakawanikwa kubva kuEurope neNorth America. International Journal yePublic Health. 2009, 54 (S2): 225-234
Kim YS, uye leventhal B. Kudheerera uye Kuzviuraya. Wongororo. International Journal yeAdolescent Medicine uye Hutano. 2008, 20 (2): 133-154
Statistics Canada - Kudheerera kweCyber ​​uye kukwezva vana nevechidiki
Statistics Canada - Kuzvishuvira kweInternet kushungurudzwa muCanada
Lee RT, naBrotheridge CM "Kana mhuka yakabatwa ichichinja: Kudheerera kubasa sekufanotaura kupikisa / kudheerera, kubata, uye kugara zvakanaka". European Journal yeBasa uye Sangano Psychology. 2006, 00 (0): 1-26
Ndedzipi dzimwe nhema dzinozivikanwa pamusoro pekudheerera?
Nhema #1 - "Vana vanofanirwa kudzidza kuzvimiririra."
Chokwadi – Vana vanoshinga kugunun’una nekushungurudzwa vanenge vachiti vakamboedza voga havakwanise kurarama nedambudziko iri. Bata zvichemo zvavo sekudaidzira kubatsirwa. Pamusoro pekupa rubatsiro, zvinogona kubatsira kupa vana kugadzirisa matambudziko uye dzidziso yekushinga kuvabatsira mukubata nemamiriro ezvinhu akaoma.
Nhema #2 - "Vana vanofanira kudzosera kumashure - chete zvakanyanya."
Chokwadi - Izvi zvinogona kukonzera kukuvadza kwakakomba. Vanhu vanodheerera vanowanzova vakuru uye vane simba kupfuura vavanodheerera. Izvi zvinopawo vana pfungwa yekuti mhirizhonga inzira iri pamutemo yekugadzirisa matambudziko. Vana vanodzidza kudheerera nekuona vanhu vakuru vachishandisa simba ravo kuita zvehasha. Vakuru vane mukana wokugadza muenzaniso wakanaka nokudzidzisa vana nzira yokugadzirisa nayo zvinetso nokushandisa simba ravo nenzira dzakakodzera.
Nhema #3 - "Inovaka hunhu."
Chokwadi - Vana vanoshungurudzwa kakawanda, vanozvitarisira pasi uye havavimbe nevamwe. Kudheerera kunokanganisa mafungiro emunhu.
Nhema #4 - "Tsvimbo nematombo zvinogona kutyora mapfupa ako asi mazwi haangambokukuvadza."
Chokwadi - Mavanga akasiiwa nekudana-zita anogona kugara hupenyu hwese.
Nhema #5 - "Hakusi kudheerera. Vari kungotsvinya chete.”
Chokwadi - Kutsvinya kunorwadza uye kunofanira kumiswa.
Nhema # 6 - "Kwagara kune vanodheerera uye zvichagara zviripo."
Chokwadi - Nekushanda pamwe chete sevabereki, vadzidzisi uye vadzidzi tine simba rekushandura zvinhu uye kugadzira ramangwana rakanaka revana vedu. Senyanzvi inotungamira, Shelley Hymel, anoti, "Zvinotora nyika yese kuchinja tsika". Ngatishandei pamwechete kushandura mafungiro pamusoro pekudheerera. Mushure mezvose, kudheerera haisi nyaya yekuranga - inguva yekudzidzisa.
Nhema #7 - "Vana vachave vana."
Chokwadi - Kudheerera maitiro akadzidzwa. Vana vangave vachitevedzera hukasha hwavakaona paterevhizheni, mumabhaisikopo kana kuti kumba. Tsvagiridzo inoratidza kuti 93% yemitambo yemavhidhiyo inopa mubairo maitiro echisimba. Zvimwe zvakawanikwa zvinoratidza kuti 25% yevakomana vane makore 12 kusvika 17 vanogara vachishanyira nzvimbo dzepaindaneti dzinouraya vanhu uye dzinovenga, asi zvidzidzo zvekudzidza nekunyora zvinobudisa nhau zvakaderedza kuona kwevakomana zvemhirizhonga, pamwe nekuita zvechisimba munhandare. Zvakakosha kuti vanhu vakuru vakurukure nezvemhirizhonga munhau nevechidiki, kuti vadzidze kuti vangaichengeta sei. Pane kudikanwa kwekuisa pfungwa pakuchinja kwemaitiro pamusoro pemhirizhonga.
Source: Hurumende yeAlberta
Kana iwe uchida kuzvipira ne BullyingCanada, unogona kudzidza zvakawanda pane yedu Batanidzwa uye Iva anozvipira mapeji.
Tinogara tichitsvaga vanhu vane shungu, vane shungu, uye vakazvipira kutibatsira kumisa vechidiki vari munjodzi kuti vasashungurudzwa.